ရန်ပိုင်| November 15, 2012 | Hits:6,843
16 | | အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး (ဓာတ်ပုံ – မြကေသီခိုင် / Facebook)
မန္တလေး၌ ကချင်စစ် ရပ်စဲရေး ဆုတောင်း၍ ဒုက္ခသည်များသို့ ကူညီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေး ခရီးစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း
ရှေးဟောင်းနံရံပန်းချီများ ထိန်းသိမ်းရေး ငွေကြေး လှူဒါန်းနိုင်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment zaw kind November 15, 2012 - 12:53 pm	တန်ဘိုးရှိတဲ့လေးစားရတဲ့ မြန်မာ ဂီတပညာရှင်တဦး ပျက်စီးသွားလို့ ၀မ်းနည်းပါသည်…
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 16, 2012 - 3:57 am	ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ အလေးပေးတဲ့ တကယ် အစားထိုးမရတဲ့ အနုပညာရှင်တဦးပါ။
Reply	ရာဇာ November 15, 2012 - 1:09 pm	ကိုတိုးကြီး က ဒီတခါတော့ သီချင်းထဲကအတိုင်း အနောက်ဖက်မျက်နှာ ကျားကွက် တကယ်ရွှေ့လိုက် ပြီပေါ့………..
Reply	အောင်မျိုးမြတ် November 15, 2012 - 9:22 pm	ကိုတိုးကြီး…ဘယ်လိုပြောရမလဲ။နှမျောတယ်ဗျာ။မြန်မာဆန်တဲ့မြန်မာ့သံစဉ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့..ကိုတိုးကြီးကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
Reply	Nway Nway Lynn November 15, 2012 - 9:28 pm	နှမြောစရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အနုပညာကတော့ ရှင်သန်နေဦးမှာပါ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ
Reply	zaw November 16, 2012 - 12:01 am	မိသားစုနဲ.ထပ်တူ၊ ၀မ်းနဲကြေကွဲ၇ပါတယ်။
Reply	maung maung aye November 16, 2012 - 1:19 am	ကိုတိုး ကြီးဆုံးပါးသွားတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း ကျေကွဲမိပါတယ်။
Reply	kyawmintun November 16, 2012 - 7:37 am	သူငယ်ချင်းမင်းမင်းဦး…..ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းမိတယ်….သူငယ်ချင်းအဖေကို အမြဲလေးစားလျက်ပါ…
Reply	love zayo November 16, 2012 - 11:52 am	ကိုငှက်၊ဗိုလ်ထီးနဲ့ ကိုတိုးကြီး တို့ရဲ့ဂီတသံတွေအမြဲရှင်သန်နေပါစေ…..
Reply	saw wai zin November 17, 2012 - 12:07 pm	အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်သူနဲ့ကအရမ်းကိုခင်မင်ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါအရမ်းကိုနှမြောပါတယ်ဗျာ..
Reply	dragon November 16, 2012 - 8:30 pm	ကောင်းတဲ့သူတွေက ဘာလို့စောစောသေတာလဲ လောကကြီးက
Reply	မျိုးဆက် November 16, 2012 - 11:57 pm	ကိုတိုးကြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။
Reply	aungsan November 17, 2012 - 12:35 am	လွမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတိုးကြီးသံစဉ်တွေ
Reply	အောင်အောင် November 18, 2012 - 1:49 am	နှမျှောမိတယ် ဦးတိုးကြီးကိုဗျာ သံဇဉ်ကောင်းကောင်းလေး ဘယ်လိုဆက်လက်ထင်ရှားနိုင်တော့မလဲဗျာ သူရဲ့သီချင်းတွေက အေးတယ် နားဝင်ချိုတယ် အသံကလဲ အောင်တယ်လေ ဗျာ လိုက်ဆိုလို့ လဲ ခတ်တယ် အဲဒါကြောင့် အရမ်းကြိုက်မိတယ် အခုလဲ ဦးတိုးကြီး သီချင်းကိုနားထောင်နေလျက်ပါ
Reply	arker oo November 18, 2012 - 12:46 am	ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ